Ukuphunyuka kwezwe eliyimfihlo ngokubukwa okumangalisayo - I-Airbnb
Ukuphunyuka kwezwe eliyimfihlo ngokubukwa okumangalisayo
Chipstead, England, i-United Kingdom
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Lynne
U-Lynne Ungumbungazi ovelele
Indlu yezivakashi ebukekayo, eneziqu eziphelele, ebekwe engadini yangasese yendlu encane yekhulu le-14 etholakala edolobhaneni elihle lase-Chipstead. Ukuphunyuka kwezwe okuphelele nokufinyelela ngokushesha eLondon naseGatwick Airport uhambo olufushane lwetekisi. I-guesthouse inikeza ukubukwa kwendawo yasemaphandleni evulekile, jabulela ukuthula okuphelele nokuzola, ubumfihlo obuningi, konke endaweni yobuhle bemvelo obuvelele. Uma ufuna ukuhlola iSurrey enamahlamvu enezixhumanisi ezinhle zokungena eLondon, indlu yethu yezivakashi ikunikeza indawo ekahle.
I-guesthouse yethu ihlotshiswe kahle futhi inazo zonke izinto ezidingekayo nezitsha ozozidinga ngokuhlala kwakho. Indawo yokungena yangasese ivula indawo yokuhlala evulekile enezinhlamvu eziningi ezihlanganisa i-oki flooring yonke kanye nemishayo yokhuni eveziwe. Lesi sikhala sihlanganisa ikamelo lokulala elincane eliphindwe kabili elinendawo eyanele yokulenga kanye nesitoreji, ikhishi lesimanje elifakelwe zonke izitsha ezidingekayo, ipulani elivulekile lokuhlala elinemibono emihle yasemaphandleni kanye nosayizi omuhle, igumbi lokugeza lesimanje eline-WC kanye nesitsha sokugeza. Ezinye izinzuzo zifaka i-Wifi yonkana, i-TV, isidlali se-DVD, ama-radiator kagesi nolwazi oluningi oluwusizo endaweni yangakini.
Le ndlu yezivakashi ethokomele ilungele umuntu oyedwa noma izithandani - uma udinga ukuhlalisa ingane/umuntu owengeziwe, kunesikhala sombhede oyedwa wesikhashana egumbini lokuhlala ukuze uthole enye imali ekhokhwayo.
Indlu yezivakashi inokufinyelela okuqondile izingadi ezinhle futhi izuza emphemeni wayo wangasese, enezihlalo zangaphandle kanye ne-BBQ uma ufisa ukudla ngaphandle noma ukubuka inkanyezi. Ukungena endlini yezihambeli kudlula umgwaqo ophuma endaweni yokupaka ngaphandle komgwaqo.
Ibhulakufesi le-continental elimnandi lifakiwe endaweni yakho yokuhlala - uma unesifiso sokunye okwengeziwe, lokhu kuyatholakala ngenkokhelo eyengeziwe.
IChipstead iyidolobhana elikhangayo, elinomlando elitholakala eSurrey endaweni eseningizimu yeLondon. Uma ufuna indawo ephumuzayo yokubalekela emaphandleni nokuhamba kahle, izindawo zomlando ezithokozisayo, izindawo zokucima ukoma ezindala eziphakela ukudla kwasendaweni nobhiya (i-13th Century Well House Inn ibanga nje elifushane ukusuka ekhabetheni - okungafanele uphuthelwe), khona-ke. ukwamukelwa okufudumele kukulindile lapha eChipstead.
Izindawo ezizungezile zifaka amadolobha emakethe anomlando iReigate neDorking enikezela ngezitolo ezizimele ezahlukahlukene, imigoqo kanye nezindawo zokudlela kanye nokubukwa okumangalisayo kuyo yonke iNorth Downs enhle eNational Trust's Box Hill.
Eduze futhi okufinyeleleka kalula yiHampton Court Palace, Kew Gardens, Windsor Castle, The Surrey Hills, Epsom Derby, Thorpe Park, Chessington, Lego Land, RHS Wisley, Brooklands Museum, Royal Ascot, Wimbledon, Twickenham Stadium, Kempton kanye neSandown Race Courses. nezinye izindawo eziningi ezithakazelisayo ongazivakashela. Isevisi yamatekisi yomuntu siqu eya kumcimbi/indawo ngayinye ingahlinzekwa uma ihlelwe kusengaphambili.
ULynne Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Chipstead namaphethelo